China High Quality Single Cr123A Battery Holder ကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
တစ်ခုတည်း Cr123A ဘက်ထရီ Holder
Single Cr123A Battery Holder သည်သင်၏ဘက်ထရီများကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူစေရန် pin နှင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤ Single Cr123A Battery Holder သည် 3.0V ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သောပစ္စည်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
Single Cr123A Battery Holder ၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ၁
ဤ Single Cr123A Battery Holder သည် SCM စနစ်၊ Arduino စနစ်၊ အခြားအသိဥာဏ်ရှိသောကားများ၊ ခြေရာခံကားများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာစသည်ဖြင့် CR123A ဘက်ထရီတစ်လုံးကိုထိန်းထားနိုင်သည်။ 100% ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာများနှင့်တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများဖြင့်
Single Cr123A Battery Holder ၏ Product Parameter (Specification)
ထုတ်ကုန်အမည် Cr123A ဘက်ထရီလက်ကိုင်
ပစ္စည်း: PA Resin 94 V0 ဖြစ်သည်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: ၄၂.၉ စင်တီမီတာ x ၁၈ စင်တီမီတာ x ၁၄.၃ စင်တီမီတာ
၃။ Cr123A ဘက်ထရီသိုလှောင်သူ၏ထုတ်ကုန်ပုံစံနှင့်အသုံးချမှု
1. ဤ Single Cr123A Battery Holder ကို 3.0V ဘက်ထရီအထွက်သို့ထုတ်ပေးနိုင်သည်
၇။ SCM စနစ်၊ Arduino စနစ်၊ အခြားအသိဥာဏ်ရှိသောကားများ၊ ခြေရာခံကားများ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာစသည်တို့အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပြင်ပပါဝါအရင်းအမြစ်
Single Cr123A Battery Holder ၏ 4. Product Details
Single Cr123A Battery Holder အသေးစိတ်
ပစ္စည်း: PA Resin 94 V0
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Cr123A ဘက်ထရီလက်ကိုင်
Mounting Type: ဘက်ထရီ Cr123A
အရွယ်အစား: ၄၂.၉ စင်တီမီတာ x ၁၈ စင်တီမီတာ x ၁၄.၃ စင်တီမီတာ
Single Cr123A Battery Holder ၏ထုတ်ကုန်အရည်အချင်း ၅
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Single Cr123A Battery Holder အားလုံး
၆။ Cr123A Battery Holder တစ်လုံးချင်းထုပ်ပိုး။ တင်ပို့ခြင်း
Cr123A Battery Holder ၏ ၇. အမေးအဖြေများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ခုတည်းသော Cr123A ဘက်ထရီသိုလှောင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းတွင်နှစ် ၂၀ ရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းလုပ်ငန်း ၁၀၀ အတွက်ထောက်ပံ့မှုနှင့်ဖောက်သည်များစွာသည် ၁၀ နှစ်ကျော်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရုံသာမကဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပြဿနာများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
hot Tags:: Cr123A ဘက်ထရီလက်ကိုင်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက် CE၊ ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်